Mogadishu Journal » 2019 » November » 16
//November 16, 2019
Mjournal :-Wafdi uu hoggaaminaayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalalka Yurub ayaa hadda gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar. Waxaa lagu waddaa in uu kulamo la yeesho madaxda dalka Qatar. Dowladda Qatar ayaa ka mid ah...
Somalia has described the arms embargo imposed by the UN Security Council as an open-ended regime with no benchmarks to attain before it is lifted. Reacting to the passage of Resolution 2498 (2019), Somalia’s Permanent Representative to the UN Abukar Dahir Osman said the decision...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa uu eedeeyn kulul u jeediyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu duulan u kusoo yahay Somaliland. Waxaa uu sheegay Muuse Biixi in dowladda Farmaajo ay dagaal kula jirto qaar kamid ah...
Mjournal :-Madaxweynaha Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada ee Garoowe ku qaabilay Safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Danjire Ben Fender OBE iyo Wafdi uu hogaaminayo. Kulanka waxaa Madaxweynaha ku weheliyey Madaxweyne Ku-xigeenka ...
Mjournal :-Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa magacaabay Saddex Taliyaal cusub ee ciidamada booliska ah. Taliyaasha cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay taliyaal ka noqonayaan saldhigga Booliska garoonka diyaaradaha,Akademiyada Ciidanka boliiska...
Mjournal :-Faah faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa Nin hubeysnaa Bastoolad oo Maanta Gudaha Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ku dilay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka dowladda. Goobjoogayaal ah la hadlay Idaacadda Dalsan ee Magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in dilkan uu ka...
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Guddiga cusub ee Doorashooyinka Puntland
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta kulankoodii u horeeyay ku yeeshay xaruntooda Garowe tan iyo markii ay soo doorteen Khamiistii Guddoomiye Baarlamaan cusub oo ay ku bedeleen midkii ay Mooshinka ku rideen. Kulanka maanta waxaa shir Gudoominayay...
Mjournal :-Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ayaa waxaa Maanta kulan ku yeelanaya Golaha Wakiilada dowlad Goboleedka Puntland, waana kulankii ugu horeeyay ee yeelanayan kadib Doorashadii ka dhacday Xarunta Baarlamaanka. Ajendaha kulanka Golaha Wakiilada Puntland ayaa...
Mjournal :-Kulan ay magaalada New York u yeesheen xubnaha Golaha Ammaanka ee Q Midoobey ayay kaga doodeen qaraar ay hor dhigtay dowladda UK oo la xiriiray muddo kordhinta xayiraada hubka ee saran Somalia. Golaha ayaa ugu dambeyn isku raacay qaraarka, iyadoo muddo sanad lagu...
Mjournal :-Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa kulan ay ku yeesheen Magaalada New York ee Dalka Mareykanka,waxaana ay ugu codeeyeen in la kordhiyo muddada cunaqabateynta ee saaran Soomaaliya. Cunaqabateyntan ayaa la xiriirta Hubka iyo Dhuxusha Soomaaliya,waxaana Goluhu ku...